Malunga nathi -Fujian Snowman Co., Ltd.
U-Snowman uzibophelele kuphando kunye nokuveliswa kweenkqubo zokupholisa ikhonkrithi, ii-chiller zamanzi, ukugcinwa komkhenkce, kunye nabanye oomatshini beqhwa. Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya: chiller Industrial, oomatshini Iceyiki Flake, oomatshini Tube Ice, Block oomatshini ice, Plate oomatshini ice, kunye neenkqubo eziphathekayo eziphathekayo. Oomatshini bethu bomkhenkce bayilelwe ukuvelisa yonke imihla ukusuka kwiitoni eziyi-0.5 ukuya kwiitoni ezingama-80. Kwiinkqubo ezinkulu zokwenza umkhenkce, ezinje ngenkqubo yokupholisa ikhonkrithi, uSnowman unokubonelela uyilo olubanzi, ngokweemfuno zakho ezithile.
U-Snowman ufumene i-IS09001, IS014001, i-0HSAS18001 kunye ne-CE Certification, wafumana iVessel Pressure Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ Designing and Manufacturing Licence, PED & ASME Designing Iphepha-mvume loFakelo, iPayipi loXinzelelo lweBakala GC2 / GC3 yokuYila kunye neLayisensi yokuThengisa, iPayipi yoxinzelelo yoFakelo kunye neLayisensi yokuGcina, iSatifikethi seSaveyi yenqanawa,Isatifikethi sokuqinisekisa ukuqhuma kunye neLayisensi yesiQinisekiso seBanga lesi-2 seMechanical and Electrical General Engineering Contracting.
Isiqinisekiso seNkqubo yeMigangatho ye-ISO9001 Ukuqinisekiswa kwe-OHSAS 18001
Uqinisekiso lwesitya se-PED
Isiqinisekiso se-CE seYunithi yeCompressor ye-SRM
ICandelo lokuLandisa i-WST kunye neCandelo leCompressor
Isiqinisekiso se-ASME sokuNgqinisisa
P1001-112-I-08 (uthotho lwe-WNG) P1001-112-I-09 (uthotho lwe-YF)
P1001-112-I-10 (YF-XR uthotho) CE ubunyani
U-Snowman ujonge ukubonelela ngezona zisombululo ziphezulu zokupholisa ngexabiso eliphantsi. Ujikelezwe kukhetho lwezothutho olufana nesikhululo seenqwelomoya, izibuko kunye neendlela zokuhamba, singabonelela ngexabiso eliphantsi lokuthumela kubathengi bethu. Sikwanomgca wokukhawulezisa wemveliso yeemveliso zethu ezithandwayo. Ngeendleko ezisezantsi zokuhambisa kunye nemveliso ekhawulezayo, uSnowman uyakwazi ukubonelela ngezisombululo zomkhenkce ngamaxabiso afikelelekayo.
Naphi na apho kukho imveliso ye-Snowkey, kukho inkonzo ye-Snowman. Zonke izixhobo zethu zibonelelwa ubuncinci iwaranti yonyaka omnye yokutshintshwa okanye yokulungiswa simahla. U-Snowman ubonelela ngenkonzo yemini yonke kubathengi bethu. Ngeqela leenkonzo eziqeqeshiweyo emva kokuthengisa, uSnowman uyakwazi ukukunika esona sisombululo sisiso ngexesha elifutshane, ukuba unayo nayiphi na ingxaki.
U-Snowman ngoku uyakwazi ukuvelisa iiyunithi ezingama-5000 zoomatshini bomkhenkce ngonyaka. Ngenxa yesicelo esibanzi kunye neendleko eziphantsi zeemveliso zethu, bazuze ukuthandwa okukhulu eMelika, Canada, South Africa, Nigeria, Turkey, Brazil, Cuba, France, Russia, Singapore, nangaphezulu. Ngenxa yemfuno engagungqiyo yeemveliso zethu kwintengiso, u-Snowman ngoku uzama ukuba yinkampani eyonga umbane ngakumbi.
Kwi-Snowman, sikwabonelela ngeenkonzo ze-OEM xa siceliwe. Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya.
Ukusukela kwisiseko sethu, u-Snowman utsale abasebenzi abanamava kunye neenjineli. Ngenxa yoko, siye saseka iqela abaqolileyo iinjineli abanamava abaye bafumana amalungelo awodwa omenzi wechiza 6 kwilizwe Snowman.
U-Snowman uyonwaba xa ejonge iinkcukacha. Icandelo ngalinye leenkqubo zethu zokupholisa lijongwe ngokungqongqo, ukuze lihambelane nemigangatho ye-ISO9000. Ukongeza, iipesenti ezingama-80 zeenkqubo zokwenza umkhenkce zingeniswe ngaphakathi. Yile ndlela esikwazi ngayo ukubonelela ngeyona ndlela ipholileyo yokupholisa.
Iicooler zeoyile (WNG33.7) isahluli seoyile (YF600)
Isatifikethi sokuzahlulahlula ioyile (YF-XR26L, CE ungqinisiso
Ibhodi yomkhenkce (ubungakanani obuncinci) umatshini webhlokhi
Ugcino oluzenzekelayo lwetanki yokugcina iCE
Ibhodi yomkhenkce umoya opholileyo, Amanzi apholileyo, aMnye）
Iyunithi yoxinzelelo, uchungechunge lwe-SRM oluvulekileyo lwe-compressor ye-CE
Isatifikethi sokuvavanya ukuyila kwenkqubo yefriji kumatshini weqhwa
Isatifikethi sovavanyo loyilo lwe-condenser
Isatifikethi sokuvavanya uyilo lomatshini wokuklanywa komkhenkce we-CE
Isihluzi sokuNgqinisisa isiQinisekiso se-GLQ (MX) 240 (CE)
Isatifikethi sovavanyo loyilo lwe-Evaporator
Isatifikethi soVavanyo loYilo lweCondenserUqinisekiso lweWNF132
Isatifikethi soVavanyo loVavanyo lwezoQoqosho ZL-XR26M-A
P-1001-112-I-16 uthotho lweGYF
Inkqubo Refrigeration System, WZF, LZF, GZA, CE ungqinisiso
SW series ifriji Screw isiguquli
I-SRC 134 yecompressor yecompressor (isigxina esitywinwe kwisikhenkcezisi sefriji)
Uxinzelelo lwe-SP yecompressor (semi-closed piston compressor) CE ubunyani
Isatifikethi sokuhlola yoyilo seoyile (YF300, YF350, YF500)
Isatifikethi sokuhlola uyilo oludibeneyo lwezixhobo ezintathu
Isatifikethi sokuhlola inkqubo yefriji
Uyilo lokufunxwa kwamandla kunye nokugcinwa kokuqinisekiswa kwe-CE